Ndị isi ọkụ na -agbanwe agbanwe nke China LED Wepụ Ntanetị ọkụ na ụlọ nrụpụta | Saselux
Ikanam kemeghi isi Ọpụpụ Mpụpụ Mberede
Isi abụọ nke ọkụ mberede a na -ebunye ọkụ nwere 12 SMD LED. Ogologo ndụ ya karịrị awa 50000. 120-277V na-arụ ọrụ maka ọkụ. Oke ike bụ 3.5W max. Emebere ya batrị 3.6V Ni-Cd maka ihe karịrị nkeji nkeji 90.
*Ụlọ na-akpụzi thermoplastic ABS
*UL-94V-0 ọkwa ọkụ, onye na-egbochi ọkụ
*Ndọgide mgbidi, elu ụlọ
*Voltage ntinye: 120/277VAC 60Hz
*Nnukwu na -enwu enwu SMD LED 2x1.75W
*Batrị Nickel Cadmium
*Bọtịnụ ule na ọkụ ngosi ọkụ
*Oge nkwado: ≥90min
*Oge ntụgharị: <0.2 sekọnd
*Klas IP: IP20
*Mkpuchi: II, Oke: 80m²
*Okpomọkụ na -arụ ọrụ: -10 ℃ ~ 40 ℃
*Ịgbafefebiga ókè & nchedo oke ọpụpụ
*Akụkụ: 339.5x 115 x 94.8mm
① [Mgba ọkụ mberede] 120V-277V AC arụ ọrụ voltaji abụọ nke ụwa, ọkwa ọkụ 90V-0, ụlọ na-akpụzi thermoplastic ABS. A na-ewu ọkụ mberede a na batrị 3.6V Nickel cadmium maka opekata mpe ọrụ nkeji iri iteghete. Ọnọdụ ọrụ bụ -10 ℃ -40 ℃.
② [Asambodo & Nnwale] Ìhè mberede ọkụ LED agafeela ule siri ike. Ọ nwere asambodo UL na CUL. A na -anwale nnwale ule na ihe ngosi ụgwọ maka oge 2000. Ọkwa dị elu na ogo dị elu bụ ọpụrụiche anyị.
③ [Ọ dị mfe ịwụnye] Ngwa a dị mfe ịwụnye, naanị nkeji ole na ole. Ịwụnye mgbidi na ime ụlọ bụ ụzọ maka ịwụnye. A na -etinye akwa akwa niile. A ga -enwe akwụkwọ ntuziaka maka gị. Ya mere echegbula onwe gị maka otu esi etinye ya.
[Sample & Mbupu] Anyị nwere ike ịnye gị otu ma ọ bụ abụọ nlele tupu ịzụta. Mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ibu. Ọ bụrụ na iwu gị emezuola ihe MOQ chọrọ, anyị ga -akwụ ụgwọ ibu nlele. Nọmalị, ụzọ njem: site n'ikuku, n'oké osimiri na awara awara.
[Ngwa] Enwere ike iji ọkụ mberede ọkụ LED n'ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, sinima, wdg.
Nke gara aga: Ikanam ndabere batrị ndabere LED
Osote: Igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ azụmaahịa UL/CUL
Kemeghi Square Head Emergency Mgbapụta ọkụ na batrị
Ọkwọ ụgbọ ala mberede kacha mma
Track Wepụ Light Track
Onye ọkwọ ụgbọ ala mberede na -etolite ọkụ
Onye ọkwọ ụgbọ ala na -ebute mberede
Mkpuchi Mkpuchi Mberede
Ìhè mberede na egwu
Ngwa ihe mberede ọkụ ọkụ
Onye ọkwọ ụgbọ ala na -enwu ọkụ mberede 12v
Ìhè Track Mberede
Track Track Ìhè Mere
Ọkwọ ụgbọ ala ọkụ mberede
Ọkụ ọsọ ọsọ ọsọ
Ọsọ ọsọ ọsọ batrị ọkụ ọkụ
Ọnụ Ọkụ Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na India
Ọnụ Ọkụ Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na Uae
Ndozi Ọsọ Ọsọ Ọsọ ọsọ
Ebe ọrụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa ngwa ngwa na Keral
Ìhè Mberede Global Track
Mere Commercial Emergency Light
Onye na -anya ọkwọ ụgbọ ala ọrụ nnwale nnwale onwe onye
Mere Emergency Ìhè
Mgbapụta Ọkụ Ọkụ Ọkụ
Soro Mberede Light Track
Mere Emergency Track Light
Sochie Light Light UK
Sochie ọkụ ọkụ mberede
Sochie Mberede ọkụ
Sochie ọkụ ọkụ nọkwasịrị n'elu
Igwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ azụmaahịa UL/CUL
Ọstrelia Standard LED Emergency Down Light